Raysal Wasaaraha Soomaaliya Iyo Guddoomiye Baarlamaanka Oo Kala Shakiyay | Somaliland Today
← DAAWO: Dacwado Ka Dhan Shirkadda Laydhka Ee SOMPOWER Oo Loo Gudbiyay Golaha Wakiillada Iyo Xildhibbaan Ka Hadlay
DAAWO: Af-hayeenkii Xukuumaddii Madaxweyne Siilaanyo Oo Ka Hadlay Eedaymo Ugu Yimid Shirkadda TELESOM Iyo Xukuumadda Muuse Biixi Oo Ka Gaabsatay. →
Raysal Wasaaraha Soomaaliya Iyo Guddoomiye Baarlamaanka Oo Kala Shakiyay
(SLT-Muqdisho)-Inka badan boqol xildhibaan oo ka tirsan aqalka golaha shacabka Soomaaliya ayaa mooshin xil ka xayuubin ah hor dhigay guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Sh. Cismaan Jawaari waxaanay ku eedeeyeen in awoodda golaha ku tagri falo iyo in uu xeer hoosaadka golaha buriyo laakiin, wax tafaasiil ah ma raacin qoraalkooda. Warbaahinta maxalliga ah ee Muqdisho ayaa ku warramaysa in saxeexa mooshinka ee mudaneyaashu ka abaabulmay xafiiska ra’isal wasaaraha.
Mooshinkan ma ahayn mid laga sii war qabay laakiin, intii ka dambeysay dorraad oo baarlamaanku shirkadda Dp World si aqlabiyad ah dalka uga mamnuucay ayay kululaatay siyaasadda ku saabsan mooshin lagu eryayo Jawaari. Xalay oo u dambeysay ayaa kulamo iyo xodxodasho kadib subaxnimadiiba lagu waabariistay Jawaari lana hordhigay.
Warbaahinta Hiiraan ee fadhigeedu yahay Soomaaliya ayaa sheegtay in xildhibaannada taageersan guddoomiye Jawaari kulamo xasaasi ah ka dib qorshahoodu yahay aloosidda mooshin ka dhan ah ra’isal wasaare Xasan Cali Khayre. Hiiraan waxay sheegtay in warar xogogaal ah sheegayaan in Mr Khayre ku lug leeyahay eryidda Prof Jawaari laakiin, lama oga arrimahan sababaha iyo cidda daaha dabadiisa ka hagaysa.
Aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa shalay la hor dhigay xeerka Dp World lagaga mamnuucayo Soomaaliya laakiin, goluhu wuu ka maagay waxaanu maanta isugu yimid dood kala duwan iyada oo mudaneyaasha qaar sheegayaan in xeerkan lagu celiyo golaha Shacabka, kuwo kalena sheegayaan in la sheego faro gelinta dalalka Itoobiya ka mid tahay ee laga cabanayo waxaana doodda kulul muddo dhaafisay fadhiga oo la filayay in uu duhur ka hor soo afmeermo.
Dadka qaar ayaa sheegaya in ay jiraan dano siyaasi ah oo ka baxsan mudaneyaasha oo dabada ka hagaya mooshinnadan degdegga ku bilawday, islamarkaana gilgilay xafiisyada ugu sareeya Soomaaliya